नायक आयुष्मानको यो कस्तो चटक ? प्रियंकाको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बने (फोटोसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नायक आयुष्मानको यो कस्तो चटक ? प्रियंकाको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बने (फोटोसहित)
फागुन ११ गते, २०७६ - १२:३२
काठमाडौं । नेपाली चलचीत्र क्षेत्रकि चर्चित नायिका प्रियंका कार्कि र नायक आयुष्मान देशराज जोशीको बिवाहकाे चर्चा बिगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । इन्गेजमेन्ट गरेको करिब एक बर्ष पछि यो जोडीले आगामी फागुन २७ गते बिवाह गर्दैछन् ।
अहिले बजारमा यी जोडीको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । प्रियंका कार्की केहि दिन अगाडि मात्रै आफ्ना पाँचजना केटी साथीहरु लिएर थाइल्याण्डमा ब्याचलोरेट पार्टी मनाउन पुगेकी थिइन् । त्यतिबेला उनीहरुले सोसल मिडियामा तस्बिर तथा भिडियो पोष्ट गरेकि थिइन् । अहिले आयुष्मान देशराज जोशी फेरि आफ्ना पाँचजना केटा साथीहरुसहित पोखरामा ब्याचलर्स पार्टी मनाइरहेका छन् । यहि ब्याचलर्स पार्टी मनाइरहेको फोटो तथा भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ ।
यतिबेला आयुष्मानले प्रियंकाले ब्याचलोरेट पार्टीमा खिचाएका तस्विरका नक्कल गर्दै आफ्ना साथीहरुसँग खिचाएका तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ । जुन तस्विर रमाइला र फन्नी खालका छन् । दुबैले ती तस्विरहरु आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा शेयर गरेका छन् ।
तस्विरमा आयुष्मानले प्रियंका र उनका साथीहरुले जे गरेका छन्, त्यो हुबहु नक्कल गर्ने कोसिस गरेका छन् ।
उनीहरुले तस्विर जे जस्ता खिचाएपनि ती तस्विरहरु सामाजिक संजालमा यतिबेला ट्रोल बनिरेहका छन् । झट्ट हेर्दा ती फोटोहरु अपाच्य या भनौं नसुहाउँदो देखिन्छ । सोही फोटोहरुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तारिफ भन्दा बढी आलोचना भएको पाइन्छ । तस्विरमा अनेक किसिमका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उक्त फोटोहरुलाई ‘चटक’को संज्ञा दिएका छन् । कतिले त नाटक पनि कति गर्न सकेको जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिन भ्याएका छन् ।
फागुन ११ गते, २०७६ - १२:३२ मा प्रकाशित